सरकारकाे आदेश पालना नै भएन, लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष ! – Yuwa Aawaj
बैसाख १२, २०७८ आइतबार 699
काठमाडौं : पछिल्लाे समय काे’राेना भा’इरसकाे दाेस्राे लहर बढिरहँदा पनि मानिसहरू सचेत नभएकाे भन्दै सरकारले थप कडा कदम चाल्ने तयारी गरिरहेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार अप’रान्ह को’भिड १९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले ब्रिफिङ गरेकाे छ ।
बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित ८ , १२ जना सचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु र अन्य केही
कर्मचारीको सं’लग्नतामा काे’राेना निय’न्त्रण प्रयासबारे छलफल गर्न बैठक बसेकाे थियाे । उक्त बैठकमा कोरोनाको बढ्दाे जो’खिम, यसमा भइरहेका प्रयासहरु तथा सरकारका पछिल्ला समस्याबारे ब्रि’फिङ भएकाे बताइएकाे छ ।
उक्त ब्रिफि’ङ बैठककाे निष्कर्ष चाहिँ ल’कडाउन गर्नुपर्ने रहेकाे बताइएकाे छ । सरकारले यसअघि बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेश उल्लंघन भइरहेमा र नागरिकहरू सचेत नभएमा
लकडाउन गर्ने तयारी रहेकाे बताइएकाे छ ।सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द गर्न भने पनि अझै कतिपय स्कुल तथा कलेजहरू खुलिरहेकै छन् । कतिपय परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । सडकमा, बजारमा सबैतिर भीड उस्तै छ ।
जबकि सरकारले २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन दिएकाे थियाे । हुन त सरकारले नै उक्त नियम उल्लंघन गर्दै गरेकाे देखिन्छ । शनिबार नै पुनर्नि’र्मित धरहरा उ’द्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री नै भीडमा घेरिनुभएकाे थियाे ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत काेराे’नाकाे अवस्था भया’वह बनिरहँदा त्यताबाट नेपाल भित्रनेहरूका कारण झन् जाे’खिम बढिरहेकाे छ । नागरिकहरूकाे लाप’रवाही रोक्न काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला शहरमा ‘लक’डाउन’ गर्न उपयुक्त हुने सुझा’व सीसीएमसीले दिएकाे छ भने चिकि’त्सकहरूकाे सु’झाव पनि उस्तै छ ।
Prevभीम रावलले भन्नुहुन्छ : हामी एमाले छाडेर जादैनौं, केपी ओलीले चाहीँ पार्टी फुटाएर जान खोज्दै छन् ।
Nextसंक्र-मित छोरालाई हेरीरहेको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक !
राजेश हमालले सार्वजनिक गरे राजा विरेन्द्र आफ्नो घर आएको दुर्लभ तस्विर ।
बन्नु छ भने पानी जस्तो बन जो आफ्नो बाटो आफै खोज्ने गर्छ, ढुंगा जस्तो हैन जो अरुको बाटो पनि रोकिदिन्छ – अनमोल भनाईहरू ।